Waa maxay sababta aan u taageerno Ololaha 5% - Cunnooyinka ku socda wheels
Maxaan u taageernaa Ololaha 5%
Haddii aad la socoto waxa ka socda Xeer-dejinta Minnesota sanadkan, waxaad u badan tahay inaad maqasho wax la yiraahdo Ololaha 5%. Haddaba waa maxay Waa olole lagu taageerayo 5 boqolkiiba kordhinta maaliyadeed ee gobolka ilaa bixiyeyaasha adeegyada guryaha iyo bulshada ku saleysan. Adeegyadan, oo ay ku jiraan barnaamijyada Meals on Wheels ee maxalliga ah, waxay taageeraan waayeelka iyo shakhsiyaadka naafada ah ee guriga ku nool.
Metro Meals on Wheels waxay taageertaa dadaallada Ololaha 5% ee loogu gogol xaarayo ilaha badan adeegyadan muhiimka ah. Haddii la oggolaado, kordhinta deeq-lacageedka ayaa u oggolaan doonta barnaamijyada Cunnada ee Wheels-ka maxalliga ah inay u adeegaan macaamiil badan oo ka faa'iideysan kara cunno maalinle ah oo cusub oo ay weheliso booqashada tabaruce.
Gobolka Minnesota wuxuu aqoonsan yahay in lagu maalgeliyo adeegyada guriga iyo bulshada ku saleysan bulshada inay ka caawiso dadka da'da ah ee waaweyn iyo dadka waaweyn ee naafada ah inay ku sii noolaadaan guriga marka laga soo tago hoyga daryeelka iyo daryeelka ee qaaliga ah. Waxaan rajeyneynaa in kordhinta maalgelinta barnaamijyadan, in badan oo reer Minnesota ah ay ku noolaan karaan halka ay doonayaan inay ku noolaadaan iyada oo loo marayo helitaanka Cunnada Lugaha iyo adeegyada kale.
Maalgalinta adeegyada guriga iyo bulshada ee ku saleysan waayeelka iyo kuwa naafada ah ayaa laga jaray 1 ilaa 2.5 boqolkiiba inta lagu gudajiray wareegyada miisaaniyada midwalba mudadii dhaqaaluhu dhawaa. In kasta oo kordhin koror ah oo miisaaniyadeed la ansixiyay sanadkii hore, sharcigani wuxuu dib u soo celin doonaa maalgalinta Cuntada Lugaha Gawaarida heerarka ka hor-hoos u dhaca dhaqaalaha.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Ololaha 5%, booqo websaydhka ololaha, ama ka hel ololaha Facebook iyo Twitter.